Kenya oo xabsi daa'in ku xukuntay mid kamid raggii fuliyey weerarkii Garissa
Kenya oo xukuntay raggii lagu helay dambiga weerarkii Garissa
Maxkamadda ayaa sidoo kale 41-sano oo xabsi ah garka u gelisay laba kale oo dambiga ku cadaadey.
NAIROBI, Kenya – Maxkamad ku taala magaaladda Nairobi xarunta dalka Kenya ayaa maanta oo Arbaco ah waxay xukuno kala duwan ku riday saddex ruux oo lagu helay dambi ah in ay ka dambeeyeen weerarkii Jamaacadda Garissa.
Dhacdadaasi oo ay kooxda Al-Shabaab ka dambeysay isla markaana lasoo wariyey sanadkii 2015-kii ayaa waxaa ku naf-weysay 148 ruux, oo badankooda ahaa arday xiligaasi ku sugneyd xaruntaasi waxbarasho.
Garsooraha Maxkamada Nairobi, caasimadda dalka dhaca Geeska Afrika, Francis Andayi, ayaa garka u geliyey Maxamed Cali Cabdikar iyo Xasan Aadan Xasan 41-sano oo ay ku qaadan doonan xabsi.
Rashid Charles Mberesero, kaasi oo u dhashay waddanka Tanzania, ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, maadaama sidda ay maxkamaddu sheegtay in uu door weyn ka cayaaray weerarka, uuna isku dabariday.
Mberesero ayaa sidoo kale waxaa ku cadaatey dambi ah in uu caawiyey dableyda duulaanka dhimashada badan keenay
Wargeyska Daily Nation ayaa ku waramaya in go’aanaddan ay yihiin natiijo kasoo baxdey baaritaano iyo dabagal in muddo ah socotay.
Weerarkii Jamaacadda lagu beegsaday ayaa waxaa fuliyey afar dabley, kuwaasi oo la sheegay in ay toogteen ciidamada ammaanka.
Ninka hogaaminayey howlgalkaasi, Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Kuno isla markaana ahaa Bare sare oo ka tirsan Dugsi Qur'an oo ku yaala Garissa ayay Kenya shaacisay in ay ku dishay Soomaaliya sanadkii 2016-kii.
Xildhibaanada Soomaalida ee gobolka Garissa oo gacanta isugula tegay
Afrika 01.10.2019. 06:50
Gacan-qaadka oo yimid markii ismaandhaaf uu soo kala dhex-gelay ayaa sababay in xubno Isbitaal loola cararo.
Afrika 19.09.2020. 18:30
Rag loo haystay weerarkii Jamaacada Garissa oo dambiga lagu helay
Afrika 19.06.2019. 17:48
Kenya: 11 qof oo ku dhimatay Shil ka dhacay duleedka Garissa
Caalamka 29.08.2017. 16:47